Lahatsary Mampiharihary ny Mombamomba Ny Ankizy Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2018 15:28 GMT
Raha nahita ireo torolàlana ho an'ity Vohikala ity ianao, dia ho fantatrao fa misy karazana horonantsary izay tsy havoakanay ato mihitsy, sy ireo toe-javatra manodidina ny fakàna lahatsary manokana, izany dia midika fa tsy hisy na rohy amin'izany aza. Miresaka manodidina ny iray amin'ireo lahatsary ireo ity lahatsoratra iray androany ity.
Nanao fikarohana mombanà lahatsoratra kasaiko ho avoaka mahakasika ireo ankizy miaramila aho, no nahita lahatsary tao amin'ny tranonkala fifampizarana lahatsary, izay voalaza fa fanadihadiana natao taminà adolantsento efa ankizy miaramila taloha. Nanao fitarainana maromaro ilay adolantsento anatin'ilay lahatsary, mitory ilay fikambanana mpikomy izay nolazainy fa naka azy an-keriny, nanao fanararaotana ara-nofo taminy ary nandefa azy hanao iràka miaramila – fitarainana izay mifanaraka amin'ny fikarohana nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena manana ny hajany mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny.
Saingy mahagaga aminà lahatsary mitondra itony karazana fitarainana itony, fantatra ny anaran'ilay tanora voaresaka eto, ary ao anatin'ilay soratra miaraka aminy, ny toerana misy azy. Ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona (sy ny filazambaovao) moa dia manoro hevitra hatrany ny hiarovana ny mombamomba ny zaza tsy ampy taona amin'ny toe-javatra toy izany (jereo ny pejy 16 sy 17 ao amin'ity antontan-kevitra ity, ohatra) – na amin'ny fampajavonjavonana na amin'ny fanakonana tanteraka ny tarehy, amin'izay tsy hita ny endrik'izy ireo, ohatra hoe amin'ny fakàna ilay sary avy any aoriana na amin'ny aloka, na amin'ny fanovàna ny feony na amin'ny famerenana mandrakitra indray ny feo. Mampiseho ny sary etsy ambany fa mora ny mampanjavozavo sary iray hanafenana ny mombamomba ny olona iray.
Raha momba ilay lahatsary hitako, tsy nisy na iray aza narahina tamin'ireo fepetra ireo. Nanontany tena aho nandritra ny andro vitsivitsy raha tokony handefa ity lahatsary ity na tsia, izay tsapako fa nampipongatra olana goavana maro tao anatinà fifampiandaniana iray izay mahazatra ny fahitàna fandraisana ankizy-miaramila. Fijoroana vavolombelona mampihoron-koditra (ary tena tsy fahita firy mihitsy), ka mendrika ny ho re ny tantaran'ilay tanora – saingy misy fanontaniana maromaro aterak'ilay lahatsary. Noho izany, nanapaka hevitra aho fa tsy hampiseho anareo io lahatsary io.
Fohifohy ihany ilay lahatsary, ary toy ny manome fanambarana efa nomamina mialoha ilay tanora ao anatin'ilay izy – tsy misy olona mametraka fanontaniana mitady fanazavana, mifanohitra amin'ilay lahatsary Alive In Baghdad herinandro vitsy lasa izay. Ny lahatsoratra miaraka amin'ilay lahatsary dia nilaza fa hitan'ireo tafika ilay zazalahy taorian'ny nandosirany ireo mpaka an-keriny, ka nihevitra aho fa ny tafika no naka ilay lahatsary.
Avelatsika any ny olana aloha, mazava ho azy fa amin'ity tranga manokana ity, tsy nanaraka ny torolàlana tsara indrindra tokony ampiasain'ny fikambanana rehetra mikendry ny mahasoa ny ankizy miaramila taloha ny governemanta voakasik'izany. Ny fiaraha-miombon'antoka hampitsaharana ny fampiasana ireo ankizy miaramila, vondrona fikambanana miasa mba hampiroboroboana ny fandraràna ny fakana ireo ankizy latsaky ny 18 taona hiditra ho any amin'ny tafika mitam-piadiana, ary hanohanana ny fampiatoana ny fandrisihana, ny fanarenana sy ny famerenana ireo ankizy miaramila ho ao anatin'ny fiarahamoniny indray, dia manolotra rohy mankany amin'ireo fenitra iraisam-pirenena ho an'ny karazana asa toy itony izay tokony ho modely mahasoa.
Nanambatra tatitra vitsivitsy i Choike, fikarohana, fitaovana ary lahatsoratra momba io resaka io. Ny pejin'ny Human Security Gateway (Fiarovana ny Zon'olombelona) momba ny Ankizy sy ny Ady Mitam-piadiana dia mitondra any amin'ny tatitra maro isan-karazany. Ny pejy 113 ao amin'ny tatitra momba ny Human Security Report (tatitra fiarovana ny olombelona) dia miresaka ireo ankizy miaramila. Ary ny Tatitry ny firenena ao amin'ny Watchlist momba ny fampiasana ankizy miaramila no manome ny tantara fototr'ireo firenena manana izany ho olany manokana.